भारतमा भएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको बाबा रामदेवसंग तस्बिर भाईरल, बाबा ड्राइभर बनेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई दिए से’वा
Homeसमाचारभारतमा भएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको बाबा रामदेवसंग तस्बिर भाईरल, बाबा ड्राइभर बनेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई दिए से’वा
April 15, 2021 admin समाचार 5802
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह यतिवेला भारत भ्रम’णमा छन् । उनी अहिले हरिद्वार महाकु’म्भको निम्तो मान्न भारत पुगेका हुन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले मंगलवार महाकुम्भ मेलामा शाही स्थान गरेका छन् । उनलाई मंगल’वार पनि शाही स्नानका लागि लैजाँदा रथारोहण गरिएको थियो । उनलाई भारतमा राजाकै हैसि’यतमा भब्य स्वागत र सम्मान गरिएको छ ।
विभिन्न धार्मीक स्थ’लको अवलोकन भ्रमणमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आइतवार हरिद्वार पुगेका छन्। कोरोना महामा’रीका बीच भएको महाकुम्भ मेलामा लाखौं नागरिक जम्मा भएका छन् । भारतमा भएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको बाबा राम’देवसंग तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । तस्बिरमा बाबा रामदेवले गाडी चलाएको र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अगाडीको सिटमा ब’सेको देख्न सकिन्छ ।
एउटै गा’डीमा अन्य साधुहरु उनीहरुका पछाडीको सिटमा बसेको देखिएको छ । पूर्वराजा ज्ञाने’न्द्रले भारतमा त्यहाँका ऋषीमुनीहरुसंग पनि भेटघाट गरेका छन् ।त्यहाँ उनलाई निरञ्जनी अखडाका सन्तहरुले भव्य स्वागत गरेको भार’तीय मिडियाले जनाएका छन्। निरञ्जन पीठाधीश्वार कैलाशानन्द गिरीको निमन्त्रणामा भारत गएका उनले हरिद्वारस्थित दक्षि’णकाली मन्दिरमा पूजा अर्चना गरेका छन्।
त्यसलगत्तै ज्ञानेन्द्रले सन्तहरु र महाम’ण्डलेश्वरसँग भेटघाट गरे। उनलाई भारतले दिएको सम्मा’नको नेपालमा पनि चर्चा भएको छ । नेपालमा पूर्वराजा बनेका ज्ञानेन्द्रलाई राजाकै हैसियतमा भारतले दिएको सम्मानको चर्चा भएको हो । पीठाधीश्वर गिरीका अनुसार ज्ञानेन्द्रले भोलि शाही स्नान गर्नेछन्। सोमवार हरिद्वारको अपर’रोडमा कुनै पनि सवारीसाधन चल्नेछैनन्। सोमवार र त्यसको दुई दिनपछि महा’कुम्भमा शाही स्नान चल्नेछ।
यो पनि:यिनै अभि’नेत्री महिमा चौधरी आफूलाई गोर्खाली भन्न मन पराउँछिन्। नर्थ बंगाल एक्सप्रेस’सँगको एक भिडियो अन्तर्वार्तामा परदेश फिल्मकी अभिनेत्री महिमाले आफू सेटमा बहिनीसँग नेपाली भाषामा कुरा गर्ने गरेको बता’इन्।
‘म गोर्खाली हुँ,’ महिमाले अन्तर्वा’र्तामा भनेकी छन्। उनले काठमाडौँमा राम्रा फरेन गुड्स पाइने भएकाले गएका बेला जिन्स, क्यामरा, भिडियो क्यामेरा किनेर ल्याए’को सम्झिन्। त्यहाँको तितौरा र गुदपाक मलाई मन पर्छ,’ उनले भनिन्। उनले भनेकी छन्, ‘म फेरि नेपाल आउन चाहन्छु, मलाई नेपालमा निम्ता गर्नुस्!’ उनले उक्त सञ्चा’रमाध्यमले नेपाली भाषामै सोधेको प्रश्नको ने’पाली भाषामै जवाफ दिएकी छन्।
महिमा चौधरीको बलि’उड करियर चौपट भएको बताइएको छ । बलिउड किङ शाहरुख खानसँग फिल्म करियर सुरु’वात गरेकी उनको फिल्म करियर चौपट भएको भारतीय मिडियाले जनाएको छ । फिल्ममा काम नपाएपछि जीवन धान्नकै लागि भएपनि महिमा टिभी सोमा जजको रुपमा काम गर्न था’लेकी छन् ।
शाहरुखसँग फिल्म परदे&शबाट फिल्म करिअर सुरु गरेकी महिमा कुनै बेला ब’लिउडमा मालमाल बनेकी थिइन् । तर, अहिले आफ्नो घर परिवार चलाउन महिमा टिभी रिया’लिटी शोमा जजका रुपमा काम गरिरहेकी छन् । सन् २००६ मा विवाह गरेकी बलिउड अभिनेत्री महिमा चौधरीले वि’वाह भएको केहि समय पछि नै छोरीलाई जन्म दिइन तर उनि विवाह अगाडि नै आमा बनेकी थिइन् । र चौधरीले आफूलाई गोर्खाली भन्न मन परा’उँछिन् । इताजा खबरबाट
गोरखपुर काण्ड : दिपक र सरुले रुदैं गरे छु’ट्टिने निर्णय, तर सरुले भनिन् म छा’ड्न सक्दिन (भिडियो सहित)
January 10, 2021 admin समाचार 7004
April 25, 2021 admin समाचार 4929
March 12, 2021 admin समाचार 5225
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (241901)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (229812)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (229446)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (228436)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (227807)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (227389)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (226612)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (226190)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (194214)